Nin Masri ah oo xaaskiisa ka soo tuurey dabaqa shanaad iyo waxay qabtey - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Nin Masri ah oo xaaskiisa ka soo tuurey dabaqa shanaad iyo waxay qabtey
Booliiska dalkaasi Masar ayaa jeelka u taxaabay nin Masri ah oo xaaskiisa ka soo tuurey dabaqa shanaad ee imaarada ay deganaayeen laakiin nasiib wanaag way ka badbaaday waxayse ka jabtey dhabarka. Dadka degan imaarada ayaa u gurmadey gabadha oo ahayd 25 jir ayaa markiiba loola caraay dhaqtarka.
Booliiska oo qabtey ninkan sida arxan darada ah uga soo tuurey xaaskiisa dabaqa ayaa weydiiyay waxa ku kalifay inuu waxaan sameeyo. ” Had iyo jeer waan murmi jirney waxaanan go’aansanay inaan is maca salaameyno.
Waxase arintu sii xumaatey markii haweenayda laga helay cudurka Kooro. Sadex mar ayaa laga baray xanuunka waxana loo sheegay inay qabto cudurka. ”Waxaan ku iri iskaga tag guriga weyse diidey kadib waxaan ka tuurey dabaqa ayuu yiri ninkeed oo aan la sheegin magaciisa.
Haweenayda ayaa hadda la sugayaa inay ka soo bogsato dhaawaca ka soo gaaray dabaqa laga soo tuurey si ay u bixiso waxa sababay in ninkeeda dabaqa ka soo tuuro si loo ciqaabo ninkeeda.
Dadka badankiisa ayaa qaba inay ugu wacan tahay guriga mudada dheer la joogayo xilli Masar dhawaan ay qaaday xayiraada cudurka Kooro. Waxase wax laga naxo ah in cudur darteed dabaq looga soo tuuro.